नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी तेह्रथुमको १० औँ जिल्ला अधिबेशनको तयारीको सन्दर्भमा प्रचार प्रसार समितिका संयोजक छत्रप्रसाद रिमालसंग पत्रकार कृष्ण विदुखी गौतमले गरेको कुराकानी - koselihk
Posted by koselihk | २९ जेष्ठ २०७३, शनिबार ०१:१२ | अन्तरवार्ता |0|
नेकपा एमाले तेह्रथुमको दशौ जिल्ला अधिबेशनको भब्यताका साथ सम्पन्न हुदैछ भन्ने हल्ला छ तयारी कहाँ पुगेको छ ?
नेकपा एमाले तेह्रथुमको जिल्ला अधिबेशन आगामी २०७३ जेठ २९–३१ गते ऐतिहाँसिक रुपमा सम्पन्न हुदैछ । यो अधिबेशनलाई ब्यवस्थित गर्नकालागि मुल ब्यबस्थापन समितीले ७ वटा उपसमिती निर्माण गरेर उपसमितीलाई जिम्मेवारी दिएको छ । सबै उपसमितीहरुले विभागीय हिसाबले कामको कार्ययोजना बनाएर काम गरिरहेको छन् । त्यसमा म प्रचार प्रसार समितीको संयोजकको हैसियतले प्रचार प्रसारमा हामी यो खुशीयालीमा पार्टीको ऐतिहाँसिक दशौ जिल्ला अधिबेशन सम्पन्न गर्न गई रहेका छौ भनेर जिल्ला ब्यापीरुपमा अपिल वितरण भई रहेको छ ।
अधिबेशनको जानकारीका लागि तेह्रथुमका २ वटा एफ एम रेडियो र पाँचथर जिल्लाका १ वटा एफ एम वाट प्रचारात्मक सन्देश बजिरहेको छ । जिल्ला सम्मेलनको सन्देशलाई आम पार्टीका कार्यकर्ता समक्क्ष पुर्याउँनकालागि जिल्लाका मुख्य बजारहरु बसन्तपुर , आठराई संक्रान्ति बजार, चुहानडाँडा , औसीवजार , मोहोराहाङ्ग बजार , जिरिखिम्ति बजार । लसुने बजार र शुक्रबारेबजार गरि र जिल्ला सदरमुकाममा राखि सकिएको छ । त्यसरीनै पोष्टर पमप्लेट पनि जिल्ला ब्यापि रुपमा हामिले टाँसी सकेको छौ । वाल पेन्टिङ जिल्ला सदरमुकाम र जिरिखिम्ति बजारमा गरिएको छ । सम्मेलनलाई सजिसजाउ गर्नको लागि तुल ब्यानर र स्वागत गेट निर्माण गर्ने कार्य शुरु भई रहेको जानकारी गराउँन चाहान्छु । यस सम्मेलनको अझ सुन्दर पक्ष भनेको हाम्रो जिल्लाको पहिचान झल्किने खालको १०औ जिल्ला सम्मेलन लेखिएको हँसिया हतौडा अंकित लोगो डिजाईन गरेर सबै प्रचार सामाग्रीमा राखिएको छ । अझ सम्मेलनमा भाग लिन आउँने प्रतिनिधी स्वयंसेवक अतिथि र कलाकार हरुकोलािग पार्टीको कोष खर्च नहुने गरि आर्थिक ब्यवस्थापन बाहिरै वाट मिलाएर (क्याप) टोपीको समेत निःशुल्क ब्यवस्थापन मिलाएको छु । यसले सम्मेलनको राम्रो प्रचार होला भन्ने लागेकोले हजारौ नेता कार्यकर्ताको विचमा यो अधिबेशन सम्पन्न गर्दैछौ ।
अधिबेशनको मिति नजिकिदै गर्दा विभिन्न पदमा उम्मेरद्धारी दिनेहरुको संख्या निकै पाएको छु , के यस पटक सर्बसम्मत हुदैन कि के हो ?
हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेको अधिबेशनमा आज सम्म सबै पदहरुमा सर्बसम्मत नै भएको छ । रहर र ईच्छा धेरैको हु्नु स्वभाविक नै हो । तर अहिले सम्म पार्टीमा निरन्तर विशौ बर्ष भन्दा बढि समय काम गरेर आएका कमरेडहरु हुनुहुन्छ । त्यसकारण यो स्वभाविकै पनि छ । जहाँ सम्म सर्बसम्मतको सवाल छ । सर्बसम्मत होला र हुनुपर्छ , म भने सर्बसम्मत नेतृत्वको पक्षमा रहेको छु ।
तपाईको चाहि कुन पदमा उम्मेरद्धवारी पर्ने हो नि ?
सचिब वा उपसचिब कुन पदमा हुने हो निधो भएको छैन । मलाई सचिब पदमा, मेरो ईन्छा छ । टिमले उपसचिबमा बस्नु भनेर जिम्मेवारी दियो भने म त्योपनि मान्न तयार नै छु ।
नेकपा एमाले जिल्ला कमिटीको सचिब जस्तो महत्वपुर्ण पदमा रहेर काम गर्न सक्छु भन्ने तपाई संग के के आधार हरु छन ?
म संग निकै लामो राजनैतिक अनुभव अब भई सकेको छ । मैले २०४६ साल देखि राजनिति जिबन अनेरास्ववियु शंकर उमाविमा मा.वि. प्राक वाट शुरुवात गरेको हुँ । २०५२ मा भएको अनेरास्ववियुको १२औ जिल्ला सम्मेलन वाट सदस्य पदमा निर्बा्चित भए पछि निरन्तर सकृय छु अनेरास्ववियुको एक पटक जिल्ला कमिटीको सचिब , दुई कार्यकाल अध्यक्ष , एक कार्यकाल रापस र एक कार्यकाल म अनेरास्ववियुको केन्द्रिय सदस्य विजयी भएर काम गरेको हुँ । ०६२÷६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलन भएको बेला म अखिलको केन्द्रिय कमिटी सदस्य थिए । मेरो नेतृत्वमा आन्दोलन हुँदाहुँदै प्रहरीले पक्राउ गरि ९ दिन हिरासत राखेको हो । यहि विचमा म प्रेश चौतारी नेपालको प्रथम र दोश्रो कार्यकालको अध्यक्ष पनि भएर काम गरे । त्यसपछि म २०६२ साल देखि अनेरास्ववियु वाट विदा लिएर पार्टीमा जल्जले गाउँ कमिटीको सचिबको जिम्मेवारी बहन गरे । ८ नं ईलाका कमिटीको उपसचिब हुँदै २०६६ देखि म पार्टीको जिल्ला कमिटी सदस्य भएर निरन्तर काम गरेको छु । यस कार्यकाल मेरो जिल्ला कमिटीमा दोश्रो कार्यकाल हो । अब तेश्रो कार्याकालको लागि यो दशौ जिल्ला अधिबेशनमा सचिब पदमा मेरो उम्मेरद्धारी दिने तिब्र ईन्छा छ । सर्ब सम्मत भए धेरै राम्रो हुनेछ । यदि भएन भने पनि लोकतान्त्रिक विधी र प्रकृयालाई विश्वास नै गर्दछु । म राजनितिमा लाग्द एउटा कुरा सुनेको थिए । त्यो के भने “राजनितिले देश चल्छ समाज चल्छ र राजनितिक कर्मिको जिबन पनि राजनितिले चल्छ” भनको सुनेको थिए । त्यसैले राजनितिमा कि रेफ्री कि खेलाडि हुनु पर्देा रहेछ । अहिले भने म खेलाडिको रुपमा आएको छु । रेफ्री ले राम्रो खेलाउँनु सान्र्द्भिक होला नकि गोल पोष्ट झिकेर बाहिर नलैजाईयोस भन्न चाहान्छु ।
अनि तपाईको जिल्ला कमिटीको सचिब भएपछिको एजेन्डा चाँहि केहो?
पहिलो एजेन्डा भनेको पार्टी संन्चलान गर्ने भनेको प्राविधिक ब्यवस्थापन हो । पार्टिको जिल्ला देखि माहता कमिटी सम्मको कामलाई ब्यवस्थित गर्नु , सबै पार्टि कमिटीहरुमा सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरणको अभियानलाई स्थापीत गर्ने , पार्टिको नऔ महाधिबेशनको फैसलाका आधारमा ब्यवाहारिक रुपमा नै कार्यकर्ता पंक्ति सम्म कार्यन्वयन गर्न गराउँन लाग्ने ।
दोश्रो एजेन्डा भनेको तेह्रथुम जिल्ला विकास निर्माणका हिसाबे निकै पछि परेको हुनाले विकास निर्माणमा जोड दिने ।
तेश्रो एजेण्डा भनेको आम पार्टिका कार्यकर्ताको समस्या संग जुध्ने र सहज समस्या समाधानमा लाग्ने ।
चौथो एजेन्डा भनेको पार्टी परंपरात्मक तरिकाले संचालन भईरहेको यस परिवेशमा जिल्ला कमिटी देखि जन संगठन हँुदै माहतत कमिटी सम्म नयाँ तरिकाले पार्टीको बैचारिक पाटोलाई विकास गर्ने ।
पाँचौ एजेन्डा भनेको सामुहिक नेतृत्व र ब्याक्तिगत जिम्मेवारीलाई महशुस गरि पार्टि भित्रका गुट र उपगुटहरुलाई निरुत्साहित गर्दै सिंगो नेकपा एमाले निर्माण गर्ने ।
Previousम्याराथन धावक बैकुण्ठ मानन्धरलाई पोखराबाट विदाई
Nextनयाँ शक्ति पार्टीको धोषणा कार्यक्रममा डा. भट्टराईले के के भने?
१५ श्रावण २०७३, शनिबार १६:४२
३० फाल्गुन २०७२, आईतवार १३:०६